ဘုရားသခင်နှင့် လူသားသည် အနားယူခြင်းထဲသို့ အတူတကွ ဝင်ရောက်ကြလိမ့်မည် (ကောက်နုတ်ချက် ၆) | အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘုရားသခင် အသင်းတော်
တစ်ဦးတစ်ယောက်အနေဖြင့် ရိုးသားစွာ ရှာဖွေခြင်းရှိမရှိသည်သူတို့အပေါ် အခြားသူများက မည်သို့ သတ်မှတ်သည် သို့မဟုတ် သူတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှ လူများက သူတို့ကိုမည်သို့ရှုမြင်သည်နှင့် မသက်ဆိုင်ဘဲ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်က သူတို့အပေါ် အလုပ်လုပ်မှုရှိမရှိနှင့် သူတို့၌ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏မျက်မှောက် ရှိမရှိအပေါ်တွင်အဆုံးအဖြတ်ပေးသည်၊ ထို့ပြင် ထို့ထက်ပို၍ သူတို့၏ စိတ်သဘောထား ပြောင်းလဲမှုရှိမရှိနှင့် အချိန်အတိုင်းအတာ တစ်ခုတွင်သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏အမှုကို တွေ့ကြုံပြီးသည့်နောက်တွင် သူတို့၌ ဘုရားသခင်နှင့်ဆိုင်သည့် အသိပညာ ရှိမရှိတို့အပေါ်တွင်အဆုံးအဖြတ်ပေးသည်၊ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်က ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအပေါ် အမှုပြုသည့်အခါ ထိုပုဂ္ဂိုလ်၏ စိတ်သဘောထားသည်တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာမည်ဖြစ်ပြီး ဘုရားသခင်၌ ယုံကြည်ခြင်းအပေါ်သူတို့၏အမြင်သည် တဖြည်းဖြည်း ပိုမိုသန့်စင်လာမည်။ တစ်စုံတစ်ယောက်သည် ဘုရားသခင်ကိုကာလမည်မျှကြာအောင် လိုက်လျှောက်သည်နှင့် မသက်ဆိုင်ဘဲ သူတို့ပြောင်းလဲနေသရွေ့ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်သည်သူတို့အပေါ် အလုပ်လုပ်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။ အကယ်၍ သူတို့သည် ပြောင်းလဲခြင်း မရှိပါက သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်သည်သူတို့အပေါ်တွင် အလုပ်မလုပ်ဟု ဆိုလိုသည်။ ထိုသူများအနေဖြင့် တချို့တစ်ဝက် အစေခံခဲ့သည့်တိုင်အောင် ကံကောင်းခြင်းကိုရလိုသော သူတို့၏ရည်ရွယ်ချက်များကသူတို့ကို တွန်းအားပေးခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ ရံဖန်ရံခါ အစေခံခြင်းသည် သူတို့၏ စိတ်သဘောထား၌ပြောင်းလဲမှုကို အစားမထိုးပေးနိုင်ပေ။ အဆုံးတွင် သူတို့သည် ဖျက်ဆီးခြင်းကို ခံရဆဲဖြစ်လိမ့်မည်၊ အကြောင်းမှာ နိုင်ငံတော်အတွင်း၌ အစေခံသောသူတို့ကိုမလိုအပ်သောကြောင့်ဖြစ်သကဲ့သို့၊ စုံလင်အောင်ပြုခြင်းကို ခံထားရသူတို့နှင့်ဘုရားသခင်ကို သစ္စာစောင့်သိသူတို့ကို အစေခံရန် စိတ်သဘောထား ပြောင်းလဲခြင်းမရှိသူ မည်သူ့ကိုမျှ မလိုအပ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ အတိတ်က စကားလုံးများဖြစ်သည့် “တစ်စုံတစ်ယောက်သည် သခင့်ကို ယုံကြည်သောအခါ၊ ကံကောင်းခြင်းသည်ထိုသူ၏မိသားစုတစ်ခုလုံးအပေါ် သက်ရောက်သည်” ဆိုသည်မှာ ကျေးဇူးတော်ခေတ်အတွက် ကိုက်ညီသော်လည်းလူသား၏ ခရီးပန်းတိုင်နှင့် မသက်ဆိုင်ပေ။ ၎င်းတို့သည် ကျေးဇူးတော်ခေတ်အတွင်းအဆင့်တစ်ဆင့်အတွက်သာ သင့်လျော်ခဲ့သည်။ ထိုစကားလုံးများ၏ ရည်ရွယ်သောအဓိပ္ပာယ်မှာ လူများပျော်မွေ့သော ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ရုပ်ဝတ္ထုဆိုင်ရာ ကောင်းချီးများကိုသာ ရည်ညွှန်းသည်၊ ယင်းတို့က သခင်ကိုယုံကြည်သူ တစ်ဦးတစ်ယောက်၏ မိသားစုတစ်ခုလုံးကယ်တင်ခြင်းခံရမည်ဟု မဆိုလိုသကဲ့သို့ တစ်စုံတစ်ယောက်သည် ကံကောင်းခြင်းကို ရရှိသည့်အခါ ထိုသူ၏ မိသားစုတစ်ခုလုံးသည်အနားယူခြင်းထဲသို့ ဆောင်ယူခြင်းခံရမည်ဟု မဆိုလိုပေ။ တစ်စုံတစ်ယောက်သည် ကောင်းချီးများ ရရှိခြင်းသို့မဟုတ် ကံမကောင်းခြင်းကို ခံစားရခြင်းတို့သည် ထိုသူ၏အနှစ်သာရအရ သတ်မှတ်ပြီး အခြားသူများနှင့် တူညီသည့် ဘုံအနှစ်သာရအရ မသတ်မှတ်ပေ။ နိုင်ငံတော်တွင် ထိုကဲ့သို့သောဆိုရိုးမျိုးသို့မဟုတ် ထိုကဲ့သို့သော စည်းမျဉ်းမျိုး ရှိကိုမရှိပေ။ အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ယောက်သည် နောက်ဆုံး၌ ရှင်သန်နိုင်လျှင် ယင်းမှာ ထိုသူသည် ဘုရားသခင်၏ သတ်မှတ်ချက်များကိုရရှိထားသောကြောင့်ဖြစ်ပြီး၊ အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ယောက်သည်အနားယူခြင်းအချိန်တွင် အဆုံး၌ မကျန်ရှိနိုင်လျှင် ယင်းမှာ ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည် ဘုရားသခင်ကို မနာခံသောကြောင့်ဖြစ်ပြီး ဘုရားသခင်၏ သတ်မှတ်ချက်များကိုမဖြည့်ဆည်းနိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ လူတိုင်းတွင် သင့်လျော်သော ခရီးပန်းတိုင်ရှိသည်။ ထိုခရီးပန်းတိုင်များကိုလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်း၏ အနှစ်သာရနှင့်အညီ ဆုံးဖြတ်ပြီး အခြားသူများနှင့် လုံးဝမသက်ဆိုင်ပေ။ ကလေးတစ်ယောက်၏ ကောက်ကျစ်စဉ်းလဲသော လုပ်ဆောင်မှုကိုသူ၏မိဘများထံ လွှဲပြောင်းမပေးနိုင်ပေ၊ ထို့ပြင် ကလေးတစ်ယောက်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုလည်းသူ၏မိဘများနှင့် မဝေမျှနိုင်ပေ။ မိဘတစ်ဦး၏ ကောက်ကျစ်စဉ်းလဲသော လုပ်ဆောင်မှုကိုသူ၏သားသမီးများထံ လွှဲပြောင်း၍ မရပေ၊ ထို့ပြင် မိဘ၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုလည်းသူ၏သားသမီးများနှင့် မဝေမျှနိုင်ပေ။ လူတိုင်းသည် မိမိ၏ သက်ဆိုင်ရာအပြစ်များကို လွယ်ပိုးထားကြပြီး လူတိုင်းသည် မိမိ၏ သက်ဆိုင်ရာ ကံကြမ္မာကို ခံစားကြရသည်။ မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ အခြားသူအတွက် အစားမထိုးနိုင်ပေ။ ယင်းသည် ဖြောင့်မတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ လူသား၏အမြင်တွင် မိဘများသည် ကံကောင်းခြင်းကို ရရှိပါကသူတို့၏သားသမီးများလည်း ရရှိမည်၊ သားသမီးများသည် မကောင်းမှုကို ကျူးလွန်ပါကသူတို့၏မိဘများသည် ထိုသားသမီးအပြစ်များအတွက် ပေးလျော်ကြရမည်။ ယင်းမှာ လူသား၏ အမြင်ဖြစ်ပြီးလူသား၏ အမှုအရာများကို လုပ်ဆောင်ပုံဖြစ်သည်။ ယင်းမှာ ဘုရားသခင်၏ အမြင်မဟုတ်။ လူတိုင်း၏ ရလဒ်သည် သူတို့ လုပ်ဆောင်မှုမှလာသော အနှစ်သာရနှင့်အညီ ဆုံးဖြတ်ပြီး၊ ယင်းကို အစဉ်အမြဲ သင့်တင့်လျောက်ပတ်စွာ ဆုံးဖြတ်သည်။ မည်သူမျှ အခြားသူတစ်ဦး၏ အပြစ်ကို မသယ်ပိုးနိုင်၊ ထို့ထက်မက မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မျှအခြားသူတစ်ဦးအတွက် အပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းကို မခံရနိုင်။ ယင်းမှာ မလွဲဧကန်ဖြစ်သည်။ မိဘတစ်ဦး၏ မိမိတို့သားသမီးများအပေါ်မေတ္တာဖြင့် စောင့်ရှောက်မှုသည် မိမိတို့၏ သားသမီးများကိုယ်စားဖြောင့်မတ်သော လုပ်ဆောင်မှုများ လုပ်ဆောင်နိုင်သည်ဟု မဆိုလိုသကဲ့သို့ကလေးတစ်ဦး၏ သူ့မိဘများအပေါ် ဝတ္တရားကျေသော ခင်တွယ်မှုသည် သူတို့အနေဖြင့် သူတို့၏ မိဘများကိုယ်စားဖြောင့်မတ်သော လုပ်ဆောင်မှုများကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည်ဟု မဆိုလိုပေ။ ယင်းမှာ “ထိုအခါလယ်၌ရှိသော လူနှစ်ယောက်တို့တွင် တယောက်ကိုသိမ်းယူ၍ တစ်ယောက်မူကား နေရစ်ရလတံ့။ ကြိတ်ဆုံကြိတ်သောသူနှစ်ယောက်တို့တွင် တယောက်ကိုသိမ်းယူ၍တယောက်မူကား နေရစ်ရလတံ့” ဟူသော နှုတ်ကပတ်တော်များ၏ နောက်ကွယ်ရှိ စစ်မှန်သော အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သည်။ မိမိတို့၏ သားသမီးများအပေါ်ထားသည့်နက်ရှိုင်းသော ချစ်ခြင်းမေတ္တာပေါ် အခြေခံ၍ မိမိတို့၏ မကောင်းမှုပြုသော သားသမီးများကိုအနားယူခြင်းထဲသို့ မဆောင်ယူနိုင်သကဲ့သို့၊ မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ သူတို့၏ဇနီး (သို့မဟုတ် ခင်ပွန်း) ကို သူတို့ကိုယ်တိုင်၏ ဖြောင့်မတ်သော လုပ်ဆောင်မှုပေါ်အခြေခံ၍အနားယူခြင်းထဲသို့ မဆောင်ယူနိုင်ပေ။ ယင်းသည် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းဖြစ်သည်၊မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက်မျှ ခြွင်းချက်များမရှိပေ။ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို လုပ်ဆောင်သူများမှာဖြောင့်မတ်ခြင်းကို လုပ်ဆောင်သူများဖြစ်ပြီး မကောင်းမှုကို လုပ်ဆောင်သူများသည်မကောင်းမှုကို လုပ်ဆောင်သူများဖြစ်ကြသည်။ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို လုပ်ဆောင်သူတို့သည် ရှင်သန်နိုင်ကြလိမ့်မည်ဖြစ်ပြီးမကောင်းမှုကို လုပ်ဆောင်သူများသည် ဖျက်ဆီးခြင်း ခံကြရမည်။ သန့်ရှင်းသူများသည် သန့်ရှင်းသူများဖြစ်သည်၊သူတို့သည် မညစ်ညမ်းကြပေ။ ညစ်ညမ်းသောသူတို့သည် ညစ်ညမ်းသူများဖြစ်ကြပြီးသူတို့တွင် သန့်ရှင်းသောအစိတ်အပိုင်း တစ်ခုမျှမပါရှိပေ။ မကောင်းမှုလုပ်သူတစ်ဦး၏ ကလေးများသည်ဖြောင့်မတ်သော လုပ်ဆောင်ချက်များကို ပြုသည့်တိုင်အောင်၊ ထို့ပြင် ဖြောင့်မတ်သောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏ မိဘများကစဉ်းလဲသော လုပ်ဆောင်ချက်များ ကျူးလွန်သည့်တိုင်အောင်၊ စဉ်းလဲသော လူအားလုံးတို့သည် ဖျက်ဆီးခံရမည်ဖြစ်ပြီး၊ဖြောင့်မတ်သူအားလုံးတို့သည် ရှင်သန်ကြလိမ့်မည်။ ယုံကြည်သော ခင်ပွန်းသည်တစ်ဦးနှင့်မယုံကြည်သော ဇနီးတစ်ဦးအကြားတွင် မည်သည့်ဆက်နွှယ်မှုမျှမရှိဘဲ၊ ယုံကြည်သော သားသမီးများနှင့် မယုံကြည်သောမိဘများကြားတွင်လည်း မည်သည့်ဆက်နွှယ်မှုမျှ မရှိပေ။ သူတို့သည် သဟဇာတမဖြစ်သော အမျိုးအစားနှစ်မျိုး ဖြစ်သည်။ အနားယူခြင်းထဲသို့ ဝင်ရောက်ခြင်းမပြုမီတွင်တစ်စုံတစ်ဦးသည် ရုပ်ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာ ဆွေမျိုးများ ရှိသော်လည်း ထိုသူသည် အနားယူခြင်းထဲသို့ ဝင်ရောက်သွားသည်နှင့် ထိုသူတွင် ပြောဆိုစရာ ရုပ်ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာ ဆွေမျိုးများ မရှိတော့ပေ။ မိမိတို့၏ တာဝန်များကို ထမ်းရွက်သူများနှင့် မထမ်းရွက်သူတို့သည်ရန်သူများ ဖြစ်ကြသည်၊ ဘုရားသခင်ကို ချစ်မြတ်နိုးသူနှင့် ဘုရားသခင်ကိုမုန်းတီးသော သူတို့သည် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ဆန့်ကျင်ကြသည်။ အနားယူခြင်းထဲသို့ ဝင်ရောက်သူများနှင့် ဖျက်ဆီးခြင်းခံရသူတို့သည် မတူညီသော ဖန်ဆင်းခံသတ္တဝါအမျိုးအစားများ ဖြစ်ကြသည်။ မိမိတို့၏တာဝန်ကို ထမ်းရွက်ကြသော ဖန်ဆင်းခံသတ္တဝါတို့သည်ရှင်သန်နိုင်စွမ်းရှိလိမ့်မည်ဖြစ်ပြီး မိမိတို့၏တာဝန်ကို မထမ်းရွက်ကြသော ဖန်ဆင်းခံသတ္တဝါတို့သည်ဖျက်ဆီးခြင်းခံရကြလိမ့်မည်၊ ထို့ထက်သာမက ယင်းသည် ထာဝရတည်တံ့လိမ့်မည်။ သင်သည် ဖန်ဆင်းခံသတ္တဝါတစ်ဦးအဖြစ်မိမိတာဝန်ကို ထမ်းရွက်ရန်အလို့ငှာ သင်၏ခင်ပွန်းကို သင်ချစ်ခြင်းဖြစ်သလော။ သင်သည် ဖန်ဆင်းခံသတ္တဝါတစ်ဦးအဖြစ်မိမိတာဝန်ကို ထမ်းရွက်ရန်အလို့ငှာ သင်၏ဇနီးကို ချစ်ခြင်းဖြစ်သလော။ သင်သည် ဖန်ဆင်းခံသတ္တဝါတစ်ဦးအဖြစ်မိမိတာဝန်ကို ထမ်းရွက်ရန်အလို့ငှာ မယုံကြည်သော သင်၏မိဘများအပေါ် ဝတ္တရားကျေခြင်းဖြစ်သလော။ လူသား၏ ဘုရားသခင်အပေါ် ယုံကြည်ခြင်း အမြင်သည်မှန်သလော၊ သို့မဟုတ် မမှန်သလော။ သင်သည် ဘုရားသခင်ကို အဘယ်ကြောင့် ယုံကြည်သနည်း။ သင်သည် အဘယ်အရာကို ရလိုသနည်း။ ဘုရားသခင်ကို သင်မည်သို့ချစ်သနည်း။ ဖန်ဆင်းခံသတ္တဝါများအဖြစ်မိမိတို့၏တာဝန်ကို မထမ်းရွက်နိုင်သူများနှင့် အပြည့်အဝ အားထုတ်မှု မလုပ်နိုင်သူတို့သည် ဖျက်ဆီးခြင်းခံကြရမည်။ ယနေ့လူများသည် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးကြားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆက်ဆံရေးများရှိကြသကဲ့သို့ အသွေးအားဖြင့်လည်း ဆက်နွှယ်မှုများ ရှိကြသည်၊ သို့သော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင်ယင်းတို့အားလုံးသည် အစိတ်စိတ်အမွှာမွှာ ကွဲသွားလိမ့်မည်။ ယုံကြည်သူများနှင့် မယုံကြည်သူများသည်သဟဇာတဖြစ်ကြသည်မဟုတ်ဘဲ တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် ဆန့်ကျင်ကြသည်။ အနားယူခြင်းတွင် ရှိသူတို့သည် ဘုရားသခင်တစ်ဆူရှိသည်ဟုယုံကြည်ကြပြီး ဘုရားသခင်ကို နာခံကြသည်။ ဘုရားသခင်ကို မနာခံသော သူတို့အားလုံးသည်ဖျက်ဆီးခြင်းခံရပြီး ဖြစ်ကြလိမ့်မည်။ ကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်တွင် မိသားစုများ ရှိတော့မည်မဟုတ်၊ မိဘများ သို့မဟုတ် ကလေးများသို့မဟုတ် ခင်ပွန်းများနှင့် ဇနီးများအကြား ဆက်ဆံမှုများ မည်သို့လျှင် ရှိတော့မည်နည်း။ ယုံကြည်ခြင်းနှင့် မယုံကြည်ခြင်း၏ လွန်စွာ သဟဇာတမဖြစ်မှုသည် ယင်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆက်ဆံရေးများကို ဖြတ်တောက်ပြီးဖြစ်လိမ့်မည်။
I If one is ultimately able to survive, it’s because they’ve achieved God’s requirements. But if one can’t live in final rest, it’s because they disobey and can’t please God. Neitherachild’s wicked deeds nor their righteousness can be transferred to his or her parents. And parents’ evil or righteousness can’t be shared with any of their children. There’sadestination that each person deserves. That’s determined based on their essence. One’s destination is in no way related to others. II To each their own sins or their blessing, no one can substitute for another. If one isadoer of righteousness, they’re righteous. And one is an evildoer if evil’s what they do. Doers of righteousness are bound to survive, and destruction awaits evildoers. If one is holy, there’s no filthy spot on them. If one is filthy, they have no single holy part. There’sadestination that each person deserves. That’s determined based on their essence. One’s destination is in no way related to others. III Wicked people are to be destroyed, and survival awaits righteous people, even if an evildoer’s child is righteous, orarighteous person’s parents are wicked. There is no relationship whatsoever ifahusband believes andawife doesn’t, or ifachild believes and their parents don’t. They’re two types that do not go together. There’sadestination that each person deserves. That’s determined based on their essence. One’s destination is in no way related to others. IV So before one enters into rest, there are physical relatives ’round them. But once they’ve entered into rest, they have no such relatives to speak of. If one does their duty, they’reafoe to those who don’t. Those who love God are foes to those who hate Him. And those who enter into rest are incompatible with those who are destroyed. There’sadestination that each person deserves. That’s determined based on their essence. One’s destination is in no way related to others. from Follow the Lamb and Sing New Songs